Madaxweyne Buhaari oo mar kale dooratay hoggaaminta Neyjeeriya - Halbeeg News
Madaxweyne Buhaari oo mar kale dooratay hoggaaminta Neyjeeriya
ABUUJA (HALBEEG)- Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Nayjeeriya ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashooyinkii todobaadkan ka dhacay dalkaas, iyagoo shaaciyay in Muxammaduu Buhaari uu mar labaad ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi.
Natiijada doorashada oo soo baxday saacadihii ugu horreeyay ee maanta oo Arbaca ah ayaa lagu sheegay in Buhaari 76% uu ku guuleystay mudda xilleed labaad oo afar sano ah oo uu hogaamin doono waddanka ugu dhaqaalaha buuran uguna dadka badan qaaradda Afrika.
“Codbixintii la sameeyay 23-kii bishan ayuu Buhaari ku guuleystay codad gaaray 15.2 milyan oo u dhiganta 56% guud ahaan codadkii laga bixiyay Neyjeeriya,” ayuu yiri Maxamed Yakubu oo ah Guddoomiyaha gudddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Neyjeeriya.
Atiku Abubakar oo ahaa Madaxweyne ku xigeenkii hore haatanna ahaa musharraxa ugu weyn ee la tartamayay Buhaari ayaa helay 11.3 milyan oo u dhiganta 41% guud ahaan codadkii la bixiyay.
“Waxaan halkan uga dhawaaqeynaa in Muxamadduu Bukhaari uu ku guuleystay tartanka doorashada,” ayuu yiri Maxamed Yakubu.
Xisbiga Dadka Dimuqraadiga ah (PDP) ee uu hogaaminayo Atika Abubakar ayaa qaaddacay natiijada doorashada isaga oo guddiga doorashooyinka ku eedeeyay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq.
Tan iyo markii ay bilaabmeen ololaha doorashooyinka dalkaasi Neyjeeriya bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 260 qof ayaa ku dhimatay rabshado iyo gacan ka hadal dhex maray qaar kamid ah taageerayaasha axsaabta inkastoo tiradani ay aad uga yartahay dadkii ku dhiman jiray doorashooyinkii kuwan ka horeeyay.
Dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkii la soo dhaafay aad u kobcay, IMF
Jarmalka oo 34 milyan oo dollar ku taageeraya dalalka IGAD